Ekpere Santa Muerte iji chịkwaa mmadụ [+]?
Ekpere nke Holy Holy ka o buru nwoke Ọtụtụ mmadụ na-ele ya anya dị ka ekpere na-ejikọtaghị okpukpe Katọlik ma ọ bụ nke Ndị Kraịst n'ihi na ọ bụ nkwenye nke sitere na ụmụ amaala obodo Mexico.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ọ dị ka onyinyo mmụọ ọjọọ, eziokwu bụ na onye nsọ a enyerela ọtụtụ mmadụ aka ma nwee ike pụrụ iche n'okwu ebe mmetụta dị.
1 Ekpere nke Santa Muerte ka o buru nwoke bu Santa Muerte?
2 Ekpere nke Holy Holy ka o buru nwoke
2.1 Gịnị ka ekpere a bụ maka ya?
2.2 Kedu mgbe m nwere ike ikpe ekpere Santa Muerte ka ọ chịkwaa?
Ekpere nke Santa Muerte ka o buru nwoke bu Santa Muerte?
A na-egosi Santa Muerte dị ka nkwenye nkwenkwe a ma ama nke a na-asọpụrụ n'ọtụtụ obodo Latin America, ọkachasị na Mexico ebe a na-eme ya dị ka òtù nzuzo a na-ahụkarị.
Na-anọchi anya ụdị ọkpụkpụ nwere ike iyiri uwe ọ bụla mana nke na-anọchite anya ya kachasị bụ oji.
Ndị na-eso ụzọ ya na-echekarị na a jụrụ ha n'ihi na ha na-akwanyere nsọ nke ụka Katọlik amatabeghị nke a kama na obi na okwukwe ọtụtụ bụ Saint dị ka ndị ọzọ.
Ha na-asị mba na-akpali egwu mana nkwanye ùgwù tụkwasara obi ma ọ bụ ya bụrụ nke ikpeazụ na-eme ndị na-esowanye ndị kwere ekwe.
Mmanụ a honeyụ na-agba ọkụ, oke agụụ. Ahụrụ m gị ______________,
Ma ị na-eche maka m echiche gị na mmetụta gị ...
Ekpuola m uche gị na omume gị dum kpamkpam Site na mmetụta nke Ọnwụ a gọziri agọzi.
Akpọrọ m gị ____________________ Achọrọ m gị __________________ Bịa chọọ m __________________ Ghọọkwa m ihu na ị ga-anọ. ____________ gosi m ịhụnanya gị niile.
_____________ bia na ukwu m. Mezuo ihe niile m rịọrọ gị. Nwanyị nke abalị, nwanyị kachasị elu nke eluigwe na ala, na ume ụwa ya ...
Mmetụta na-achịkwa uche, ihe ndị ọ na-eme na obi nke __________________ Nwanyi isi ike, ị bụ Ọnwụ M gọziri agọ ewetara m _______________ a zụrụ azụ n'ihu m.
Ka ukwu ya biakwute m, Ka obi ya gosipụta ịhụnanya n'ebe m nọ, Ka ahụ ya naanị m chọrọ Ka mmụọ ya bụrụ nke m na-enye ya.
Onye m di ngozi, enyela nkeji ihe obi uto Ma obu mesie m obi ike _____________ O buru na inoghi na m, Ekwela ka nwanyi obula biakute gi Ma o buru na ha abiarute gi nso, ka ha were iwe gi kpochapu gi na ndu gi.
Ọ bụrụ na ọ bụghị nke m, mgbe ahụ ọ ga-abụ maka onye ọ bụla, Ọnwụ a gọziri agọzi, Nwanyị dị ike, ana m arịọ gị ofufe m niile you na-enye _____________________ obi ụtọ m. Myrtle sap na-agbasasị site n’ọkụ n’ọbara ya akpọrọ m gị ____________________ bịakwute m. Obi gị, echiche gị na ahụ gị Site ugbu a ha ga-abụ nke m, ruo mgbe ebighi ebi.
N’aha n’onwu nke goziri agozi ka m juo gi. Nwanyi isi ochichi wetara m _________________ Ihunanya n'ebe m no.
Na nyefere m osisiIji rube isi ma gosi m ịhụnanya niile Kedu ihe ị chere banyere m. Santísima Muerte, gi onye n’aghari ike na ike kachasi ike nke uwa nile, gbagọrọ agbagọ ________________ M na-arịọ gị ka wetara m ya otu ọ dị na site na ebe ọ dị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ otu n’ime ebe ndị kachasị gbaa ọchịchịrị tinye A _______________ n’ihu m mgbe niile ka hapụzie ya ka ọ gafere n’akụkụ nke m.
Santísima Muerte gị onye nwere ike ịbụ puku mmadụ who nwere ike ịbụ otu nde, wetara m _____________ Na n'ịhụnanya m, m na-arịọ ka ịnyịnya gị weta ya n'ihu m Na ube gị tụbara m M nwanyị dị ike hụ na ọbụlagodi na ọ bụghị nke ahụ na-esi m. , nke ahụ na-echetara m, na enwere m mmetụta ịnọ ugbu a ...
Onye obula ya na ya no na ebe Nwanyi a nke abali, Nwanyi nke ubochi a nam ario ka mo nke _________________ diri mgbe nile ...
Na ọ hụrụ m n'anya, na ọ nwere naanị anya maka ihe ga-eme ka Ọnwụ agọ m gọzie _____________________
Na obi m na na aru Isi uche na nkpuru obi nke _______________ biakwute m N’abali na ehihie unu ga ano na m Biko, a na m ario unu n’aha onwu bu onwu Nsọ Onwu M nye m ike, obi…
Na ngalaba niile nke __________________ Santísima Muerte A na m arịọ gị ka ị bụrụ onye nchebe m Ma ị mezuo ihu ọma niile m rịọrọ gị ana m akpọ gị Santísima Muerte Ahapụla m ...
Ọnwụ a gọziri agọzi agbachila m anya Ọnwụ gọzie weta m ______________!
Nke a Santa Muerte nku ga-achị nwoke siri ike ọ buru ibu ma sie ike.
Ọ bụghị ekpere nke onwe, ọ bụ ekpere na-arịọ maka ike nke mmadụ ka ọ hụ ihe ga-agbanwe obi ya.
Ọ bụghị imechu anyị ihu ma ọ bụ ime ka ndị ọzọ mee uche anyị, ọ bụ inyere ha aka ịhụ nhọrọ nke, dị ka anyị si kwuo, kachasị mma.
Nke a na ekpere niile Ha dị ike n'ezie, ịnwere ike ịme ya mgbe ọ bụla ị nọ n'ọnọdụ siri ike ebe ị na-amaghịzi ihe ị ga-eme.
N'ihe banyere ekpere a kapịrị ọnụ, ihe achọrọ bụ inwe ike ịchị onye nke ọzọ site na ekpere, nke a ga - ekwe omume ma ọ bụrụ na inwe okwukwe.
Kedu mgbe m nwere ike ikpe ekpere Santa Muerte ka ọ chịkwaa?
Oge ịchọrọ ya.
Ọtụtụ mmadụ na-atụ aro na ọ kachasị mma ịnọ naanị ya wee kwadebe gburugburu ebe obibi ka ike ọjọọ ghara imetụta nduzi nke ekpere mana nke a abụghị iwu.
Onwekorita nke a choro dika ihe di nkpa bu ihe kwesiri ntukwasi obi bu inwe otutu okwukwe nihi na anyi apughi ikpe ekpere ma oburu na anyi ekwenyeghi na anyi nwere ike nweta oru anyi.
Chọta obi ụtọ n’ịhụnanya n’ekpere Ọgha Nsọ ịchịli nke nwoke.
Ekpere ọnwụ dị nsọ maka ọrụ